Maraykanka oo Duqayn Ku Dilay Taliyihii Ciidamada Ilaalada Kacaanka Iran | HAATUF ONLINE
Home » Somali News » Maraykanka oo Duqayn Ku Dilay Taliyihii Ciidamada Ilaalada Kacaanka Iran
Maraykanka oo Duqayn Ku Dilay Taliyihii Ciidamada Ilaalada Kacaanka Iran
Baqdaad, (Haatuf) – Madaxii Ciidamada xulka ah ee Quds Force ee Iran, General Qassem Soleimani, ayaa aroortii hore ee subaxnimadan jimcaha ah lagu dilay duqeyn xagga cirka ah oo ka dhacday garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Magaalada Baqdaad, sida ay sheegeen Saraakiisha Ciraaq ka tirsan.
Weerarkan dhinaca cirka ah ee lagu dilay General Qassem Soleimani ayaa waxa amray Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump.
Hase yeeshee Hoggaamiyaha Sare ee dalka Iran Ayatollah Khamenei wuxuu amaanay Taliyaha la dilay, isagoo sheegay in loo aargudi doono. Waxaanu ku dhawaaqay saddex maalmood oo baroordiiq qaran ah oo lagu sharfayo Soleimani, oo si weyn loo rumeysan yahay inuu yahay qofka labaad ee ugu awoodda badan Iran.
Madaxweynaha Iran, Hassan Rouhani ayaa ku celceliyay halista aargudashada wuxuuna wacad ku maray in cawaaqib xumo ay ka dhalan karto. Wasiirka Arimaha Dibada Javad Zarif ayaa dhalleeceeyay dilka “ficil argagixiso dowladeed” bayaan uu soo saaray.